Restôranta any Albuquerque Nob Hill
Etazonia New Mexico Albuquerque
Ny toeram-pisakafoanana ao Nob Hill ao Albuquerque dia mihazakazaka tsy misy fanatanjahan-tena, ary avy any an-toerana mankany kontinanta. Ireto misy vitsivitsy izay tokony hofidiana.
3118 Central SE
Ny B2B dia miteraka labiera ho an'ny mpangalatra, ary izy ireo dia manompo amin'ny fomba iray mivantana sy mivantana izay mitazona ny mpiady ho avy. Ny trano fambolena dia trano vita ary maniry amin'ny lelafo mivelatra. Ny labiera dia mipetaka, miaraka amin'ireo saka mpihinam-bolo eo an-toerana. Misy divay sy cocktail koa, miaraka amin'ny mpivaro-bary tsy misy lo.
Tsidiho ireo barìka Nob Hill .
Ny fampiasana an'i Elaine ao an-toerana dia mitondra fomba fiasa vaovao ho an'ny sakafo. Ny trano fisakafoanana avo lenta dia manana endrika hafa amin'ny confluence duck, lambokely, salmon, tenderloin ary bas. Ny lambam-pandriana vita amin'ny lamba rongony dia mametraka ny lampihazo ho an'ny hariva mahafinaritra.
3523 Central NE
Fan Tang dia manasongadina ny sakafo Shinoa any Sichuan ao anaty atmosfera. Ny tompon'ilay tompon-trano ihany koa dia mihazakazaka ao amin'ny Chest's Asian Bistro.
Ny Flying Star dia nitombo ho toerana fito avy amin'ity toerana ity. Ny trano fisakafoanana fianakaviana dia manana ny tsara indrindra ao an-tanàna, sandwich tsara ary ampy entana entana mba hanapahana fifandonana. Ny zanako lahy dia mianiana amin'ny alàlan'ny sehatr'izy ireo.
Gecko's Bar sy Tacos
Gecko's is a pub gastro neighborhood and is favorite with Lobo and Isotope fans before and after the game. Ny toeram-ponenana dia toerana tsara ahantona sy miala sasatra. Ny pub grub dia ahitana sandwich, lasopy sy salady. Andramo ny Gecko.
118 Richmond NE
Ny Guava Tree Cafe dia misy sandwich, lasopy, poti-tsakafo ary mofo mofomamy mofomamy izay mirehitra kafe Amerikana.
Il Vicino pizzas dia manana io karazan-kazo madinika io ary mety ho hita ao anaty pizza ihany koa. Ny salady dia midadasika be sy mamy, ary misy calzones, pastas, sombin-tsakafo na sandwich ho an'ireo izay tsy mahatsiaro ho an'ny pizza. Fa i Il Vicino koa dia fantatra amin'ny siramamy ao an-trano, izay tsy mahagaga raha hameno ny saran-dalana. Ny serivisy dia tsara foana ary ny firoboroboana dia maivana na dia misy fiandrasana aza.
Fotoana fohy talohan'ny nahatongavan'i Nob Hill toerana fitsangatsanganana, ny Trano Monte Fire dia nanokatra ireo mpitsidika Nob Hill. Mitadiava sandwiches sy pensilihazo izay misy ny taolam-paty, trondro ary chips ary ny fajitas. Ny bar teo an-tampony dia sarisary lehibe.
Mo del Pharmacy
3636 Monte Vista NE
Model Pharmacy dia kely fotsiny afovoany, saingy tsara ny mahita. Izy ireo dia misokatra amin'ny sakafo maraina sy ny sakafo antoandro ary manana loharanom-panafody mahatalanjona efa ela izay ahafahanao mamandrika banana saka na salady rickey.
Nob Hill Bar sy Grill
Ilay tompon-trano tao amin'ny hotely dia nandany taona maro nanintona ny mponina niaraka tamin'ny trano fisakafoany hafa, Ambrosia. Indrisy fa lasa i Ambrosia, saingy noho izany dia nanjavona tao amin'ny Nob Hill Bar sy Grill. Andramo ny sakafon'izy ireo.
4300 Central SE
Orchid Thai dia misokatra ho an'ny sakafo antoandro sy ny sakafo hariva, mampiseho takelaka, karaoty, trondro ary bebe kokoa.
3624 Central SE
Ny Ragin 'Shrimp dia malaza amin'ny kobam-bary sy ny voankazo marevaka. Ny tsiro dia manana tsiro Cajun ary koa sama Jamaikanina sy indiana.
Scalo's Northern Italian Grill
Maherin'ny 20 taona lasa izay, nifindra monina tany amin'ny manodidina ary i Albuquerque dia sambatra kokoa hatramin'izao. Trano fisakafoanana manana mari-pamokarana biôlôjiana sy karazan-divay maromaro, ny sakafo italianina avaratra dia fanaingoana ny maso sy ny lela.
Ny Slice Parlor dia manolotra pizza amin'ny kitapo na ny lantihy. Misy labiera ny tapany, ny sasany amin'izy ireo dia mena. Tsara ho an'ny sakafo antoandro na misakafo.
Ny Asia Food Street dia manangona ny tsirony maro any Asia amin'ny sakafo isan-karazany. Ny takelaka madinika dia manandanja, mamela anao hanandrana ny tsirony avy amin'ny Malezia, Thailand, Vietnam, Korea, Japana ary Shina.
Thailandey Vegan dia manasongadina ny famoronana sakafo Thai miaraka amin'ny "voankazo" vegan. Hahita ireo kiriolona Thai mahazatra, manonofy mofomamy sy lasopy lasopy, izay salama kokoa.
Ireo rindrina fotsy mamirapiratra mamiratra amin'ny kobalt kobal dia mitondra anao any Gresy, saingy ny sakafo dia maniry ny hijanona. Ny vadiko dia manaiky ny sakafo matsiro ao amin'ny Yanni dia tsara kokoa noho ny trano fisakafoan'i Albuquerque hafa. Misy ny grika mahazatra mahazatra, avy amin'ny lasopy lentika mankany Spanokapita, saingy mahavariana avokoa izany rehetra izany. Ho an'ny sakafo antoandro sy ny sakafo hariva.
Zacateca's Tacos + Tequila
Mety ho mora ny manala ny "taco bar" ho toerana tsotra. Zacateca no zavatra hafa. Feno semi-finalista ilay trano fisakafoanana vaovao tsara indrindra nataon'ny James Beard Foundation tamin'ny taona 2013. Nofehezin'ny Chef Mark Kiffin ny sakafo ara-kolontsaina sy ny sakafo. Ny tako malefaka dia manana zava-manitra vaovao ary mirakitra barika Margarita miaraka amin'ny tequila sy labiera avy any Meksika.
Zinc Dine Bar sy Bistro
Zinc dia nandrombaka ny sakafony nandritra ny fanokafana, ary manana mpanjifa mahatoky. Ny bistro dia ambony ambony ary manana fanamiana mahazatra, izay manasa anao hanohy. Manana lisitry ny divay ny lakandranon'i ambany. Andramo ny takelaka fofona sy ny jirofo. Ho an'ny sakafo antoandro na sakafo hariva. Live mozika mivantana amin'ny Alakamisy.
Fotoana fiarandalamby avy any Albuquerque mankany amin'ny valam-pirenena Amerikana
Albuquerque Faritra ny volana Jolay
Private Middle and High School Albuquerque
Ireo Ivotoerana misahana ny fifidianana sy ny toerana fifidianana
Wyoming RV Parks mila mitsidika
Miresaka momba ny Swimming, Boating and Fishing ny Park Marina
Sakafo ara-pahasalamana ao amin'ny Trano Frantsay
Mandeha avy any amin'ny seranam-piaramanidin'i Minneapolis mankany Downtown Minneapolis
Toro-lalana mankany Aqueduct Racetrack sy Casino
Torolalana ho an'ny Budget Budget ho an'i Puerto Rico
10 Soso-kevitra tena ilaina ho an'ny mpitrandraka voalohany
Ny Nosy Floating amin'ny Lake Titicaca
Ny alin'ny filoha Obama teo aloha, Bo
Afaka mahazo kafe Starbucks any Las Vegas ve aho?
Sarintany lehibe: Saratoga Springs, New York